Mgbe m wụnye HD mma dị ka KLAX, ya anya egwu
Mgbe m wụnye HD mma dị ka KLAX, ya anya egwu 3 afọ 2 ọnwa gara aga #595
Mgbe m wụnye photoreal mma ya anya njọ na ndabere. Gịnị ka m na-eme ezighị ezi.
Mgbe m wụnye HD mma dị ka KLAX, ya anya egwu 3 afọ 1 ọnwa gara aga #605
E nwere ike ịbụ ihe ole na ole ihe mere ka nke a mee. Mbụ bụ àgwà nke ndịna-emeputa, na ụdị. Nke abuo, Naa kọmputa nwere na-enwe ike imeri ihe ndịna ibu nakwa dị ka ndị ọzọ mitigating ọrụ. Ka unu mara na MSFS bụ ihe kasị ike agwụ SIM mgbe wuru maka ụgbọ elu., Na ọ bụ ezie na mbụ usoro Dunk, eziokwu ahụ bụ na Bill Gates meghere ikike ka usoro ihe omume 2007 onye ọ bụla bụ onye họọrọ anwa anwa. Ọbụna enweghị Goodbye na narị puku downloads i nwere ike ike Naa nwere ngụkọta gburugburu ebe obibi. N'eziokwu na-ekwu okwu, e nwere ihe creators na-n'okpuru afọ 20 na omume a na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mma na na mma ọhụụ ihe ụgbọ elu bụ ihe niile banyere, karịa Ace isi otu aka na mmemme nke MSFS. Ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ga-azọpụta gị afọ nke na-agbalị ịghọta ihe omume na-eme ka ọ na-agba ọsọ zuru okè, e nwere abụọ ngwaahịa na ị ga-mkpa. Nke mbụ bụ fs tweak maka fps. Nke a bụ nnọọ pụrụ iche na-ịrịba ama ngwá ọrụ, dị mfe iji na ga-akụziri gị ihe ị na Na mara na otú ịghọta na usoro. Nke abụọ bụ FSPS XTREME. Nke a ga-akụ aka gị sọks nke. Im eji a 500 gig 7 afọ laptọọpụ site Toshiba.intel isi i5.i nwere ihe karịrị 3850 ugbo elu, 459 ụdị tinye ons na ihe karịrị 45000 ụgbọ elu na-agba ọsọ na truelife schedules, andi Na ọbụna nwere a glitch. ya weere nso afọ iri afọ a na-enweta nke a dị anya ma WTF n'elu 5 kọmputa na banyere 15 reinstalls na deletions black meziri mkpọka, na i n'ezie wee a oyiri nke scripting maka ndutịm microsoft. M mụtara na 2007 si microsoft na e-aga na-alot of njehie na screwups, ma taa na obodo ga na-adị ndụ weve e omume ka elu Echetụbeghị kwere omume. M anya na a enyerela, ajụjụ ọ bụla, na-ahapụ a ozi ebe a na-arịa ọrịa na-azụ gị. Theres alot of aghụghọ nke ahia, ka oge na ị ga-amụta. E wezụga, gị na nke kacha mma na saịtị ebe a, ya mere, gị na-eme nnọọ mma. Nsogbu na Ai? ihe ọ bụla, ka m mara. IM mbụ MSFS answerman. Ọ bụrụ na i cant nweta ya m ga-achọta ya.
Mgbe m wụnye HD mma dị ka KLAX, ya anya egwu 3 afọ 1 ọnwa gara aga #613
Daalụ archangelmj12 gị oké zaghachi.
svanarsdel, anyị ga-abụ ihe njikere ka aka ma ọ bụrụ na i nwere ike na-eziga anyị ụfọdụ screenshots, otú anyị nwere ike ịgwa gị ihe ị bụ na-ezighị ezi.
Oge ike page: 0.197 sekọnd